समीक्षा र सिफारिसहरू: इन्जिन शीतलन प्रणाली लागि सीलेंट
पनि सबैभन्दा विश्वसनीय कार लाजमर्दो विफलता हुन। तिनीहरूले साना छन्, तर तिनीहरू चालक केही असुविधा ल्याउन सक्छ। त्यसैले प्रवाह ठंडा प्रणाली। लिक को कारण - तापमान gradients जो पतली पर्खाल संग पाइप मा थर्मल थकान बढाउँछ। फलस्वरूप, microcracks यो त कूलेंट oozes जहाँ पाइपलाइन, देखा। समाधान बस थकित र हालको भाग प्रतिस्थापन गर्न छ, तर सधैं इच्छित वस्तु बिक्री मा पाउन सकिन्छ छैन। को रिसाव बाटो मा भयो भने यो गर्न सीलेंट मद्दत गर्छ इन्जिन ठंडा प्रणाली। कसरी यी स्रोतहरू प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न, लेख विचार गर्नुहोस्।
सीलेंट को इतिहास
यी धन अस्तित्वको बेला, radiators लीक र ठंडा प्रणाली को समस्या जोडले मोटर चालकहरुलाई अगाडि उभिएर छन्। म सिस्टम मुहर गर्न तुरून्त आवश्यकता को मामला मा गर्न मद्दत सरल तरिका पत्ता लगाउन थियो।
त्यसैले, शुष्क तोरी प्रयोग गर्नु अघि। सक्षम पाउडर को रूप मा कूलेंट संरचना थपियो जब धेरै चाँडै कम वा पूर्णरुपले को कूलेंट रिसाव हटाउनु। तर यो "चिकित्सा" को प्रयोग गरेर पछि यो सबै धुन आवश्यक थियो। आखिर, मात्र पाउडर microcracks गोल, तर ठंडा सिस्टम पनि सबै cavities। आज, यो तोरी प्रयोग गरिएको छैन। तर त्यसपछि उनको चालक द्वारा 300 500 किमि पार को मद्दतले। यो नुस्खा धेरै चालक अफगानिस्तान मा सोभियत सेना बाँच्न मदत छ।
आधुनिक रासायनिक उद्योग निरन्तर विकसित र तपाईंले पहिले नै छिटो कुनै पनि लिक हटाउन र सेवा स्टेशन प्राप्त गर्न अनुमतिको विभिन्न उपकरणहरू को उत्पादन महारत छ। यी धन को धेरै प्रकार छन्। चालक अक्सर के ठंडा प्रणालीको लागि सबै भन्दा राम्रो मुहर छ बारे आश्चर्य। समीक्षा पनि रुचि कार मालिक हुन्। समीक्षा - यो कुनै पनि विज्ञापन भन्दा धेरै राम्रो छ। तिनीहरूले यो वा त्यो वास्तविकता मा कसरी प्रभावकारी अर्थ देखाउँछ।
यी उपकरण एक panacea छैनन् र स्थायी रूपमा लिक निर्मूल गर्न सक्दैन। कुनै पनि पदार्थ पनि ठंडा सिस्टम काम खराब बनाउँछ, त्यसैले यस्तो रसायन प्रयोग मात्र निकटतम सेवा स्टेशन धेरै टाढा जान गर्दा अन्तिम उपायको र खराब मामला, रूपमा सिफारिस गरिएको हो।
रेडिएटरको मा च्यानलहरूको गिरावट
को सीलेंट प्रयोग एकदम रेडिएटरको काम को प्रभावकारिता कम गर्छ। त्यसैले च्यानलहरू भरा। आधुनिक radiators स्थापित textolite वा प्लास्टिक spirals, रेडिएटरको सतह गर्न कूलेंट देखि गर्मी स्थानान्तरण सुधार गर्न डिजाइन जो। छाप लागि अर्थ जसबाट निकै सम्पूर्ण throughput च्यानल, तर भंवर प्रभाव मात्र होइन कम, यी helices को सतह मा सञ्चय छ। इन्जिन शीतलन प्रणाली, समीक्षा लागि सीलेंट प्रयोग भएकाहरूलाई, सुझावहरु यसलाई रोकथाम को लागि एक माध्यम छैन भनेर दिएको किन छ। यो आकस्मिक को मामला मा रिसाव रोक्न प्रभावकारी तरिका हो। उपकरण प्रयोग गरेर पछि, तपाईं हुन धेरै राम्ररी पुरा सिस्टम कुल्ला र क्षतिग्रस्त भागहरु प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
को ठंडा सिस्टम लागि Sealants को प्रकार
यी धन को दुई प्रकार हो। ती हुन्:
बहुलक आधारित हो।
पाउडर उपचार साथै काम तोरी रूपमा। को ठंडा तरल यसले swells देखि, को पाउडर मा अवशोषित र दरार को किनारा गर्न clings छ। यो बिन्दुमा यो तरल पदार्थ को रिसाव रोक्छ जो blockage, गठन। धुलो मुहर सानो diameters चर्किएको धेरै प्रभावकारी हुन्छ। तसर्थ, प्वाल व्यास 1.5 मिमि भन्दा बढी हुँदैन। को दरार ठूलो आकार छ भने, यी उपकरण प्रयोग काम गर्ने छैन।
तिनीहरूले अक्सिजन संग सम्पर्क प्रवेश गर्दा Polymeric रचनाहरूको कठोर। को संरचना प्रणाली भित्र हालिएको थियो पछि, यो एक ठंडा मिश्रण संग मिश्रित छ। यसबाहेक, कूलेंट को संरचना संग ठाँउ लिक मा पतन र अक्सिजन को प्रभाव अन्तर्गत solidification प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यी प्रभावकारी छन्, तर केवल यदि प्वाल व्यास छैन 1 भन्दा बढी मिमी छ।
लाभ र Sealants को बेफाइदा
लाभ स्पष्ट छन् - यो निकटतम सेवा स्टेशन प्राप्त र अधिक तात्दै देखि मोटर सुरक्षित गर्न मौका छ। आखिर, यो सधैं एक टो ट्रक कल गर्न सक्ने क्षमता छैन। तर यो autochemistry को प्रभावकारिता मात्र सानो पोखिन्छ देखिन्छ। यो इन्जिन ठंडा प्रणाली राम्रो सीलेंट चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ, चयनमा मद्दत गर्न पहिले नै यी उपकरण प्रयोग गर्ने ती समीक्षा।
समीक्षा निम्न भन्छन्। यी रचनाहरूको को बेफाइदा तिनीहरूले मात्र मर्मत को स्थान पहुँच अनुमति र मात्र सानो कमजोरीहरू हटाउनु छ। प्रयोग पछि राम्ररी सारा सिस्टम धोए गर्नुपर्छ, तर यो सिलेंडर टाउको प्रतिस्थापन गर्न भन्दा र तात्दै पछि प्रमुख मरम्मत गर्न धेरै सजिलो छ।
को सीलेंट संग वाहन लाभ 100 भन्दा बढी मी हुँदैन। आखिर, यी पदार्थ एकदम को ठंडा सिस्टम को प्रदर्शन घटाउन। एकदम मिश्रण ठंडा रेडिएटरको मार्फत पदावनत प्रवाह पनि एकदम गर्मी रिकभरी को दक्षता मोटर तापमान वृद्धि छ कम गर्छ।
यो घरेलू उत्पादन, तर अनुकूल बनाइएको शान संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्पादन हो। एजेन्ट आधारित सेतो पायस बहुलक छ। संरचना धेरै सजिलै हल्लाइन्छ र तुरुन्तै एक पटक समारोह राम्ररी पढ्ने ट्यांक मा हुन्छ।
पाठ्यक्रम उहाँले 1 मिमी, र केवल चार यस्तो छेद को सबै भन्दा ठूलो प्वाल संग स्टील पाइप मा प्वालहरू plugging लागि परीक्षण असफल भयो। यो 0.3 मिमि, 0.5 मिमी, 0.8 मिमि र 1 मिमी। तर, प्वाल बाँकी त छिटो छैन संग छाप। पनि बोसो धेरै पछि छोडेर हो। यो लोकतान्त्रिक संरचना को मूल्य, तर यो गम्भीर क्षति को मामला मा मदत गर्दैन। उहाँले र्याङ्किङ्ग अन्तिम, छैटौं स्थानमा लगे। इन्जिन ठंडा सिस्टम यो सीलेंट तटस्थ मालिक समीक्षाएँ। यो राम्रो केही भन्न असम्भव छ। तर एक कम लागत संरचना, सेवा स्टेशन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ जो, यो फिट हुनेछ।
Gunk रेडिएटर मुहर सुपर
यो उत्पादन अमेरिका मा निर्मित छ। यसको मूल्य 160 rubles छ। यो बाक्लो खैरो मिश्रण। यसलाई चाँडै र कुशलतापूर्वक काम गर्दछ। उत्पादन लगभग एक साथ सबै प्वालहरू बन्द र सक्षम छ। तथापि, धेरै बोसो। को कूलर एकदम पुरानो र फोहोर छ भने यो धेरै खतरनाक हुन सक्छ। यो उत्पादन साथ सँगै इन्जिन ठंडा सिस्टम लागि कसरी सीलेंट कुल्ला थाहा हुनुपर्छ।
हामी उत्पादन पनि प्रभावकारी छ, भन्न सकिन्छ। गति काम राम्रो स्तरमा पनि छ। तर अवशिष्ट दूषण को downsides ठूलो रकम बीच। तर यो, फेरि, बजेट आपतकालीन लागि विकल्प।
नमस्ते-गियर लीक बन्द
संयुक्त राज्य अमेरिका - निर्माताको पनि छ। उत्पादन नीलो-हरियो रंग को एक fibrous पदार्थ हो। को संरचना राम्ररी भड्काए गरिएको छ पछि, आफ्नो काम बरु अनौठो देखिन्थ्यो। लिक रोकियो र फेरि देखियो। पहिलो परीक्षण प्वालहरू ठंडा सिस्टम को ट्यांक पूर्ण सबै तरल गएको छ भने मात्र भरिएको छन्। उत्पादन पनि प्वाल सकिन corked।
को प्लग पनि एक एकदम ठूलो खाडल मा गठन हुनुहुन्छ किनभने उच्च दक्षता, - जूरीको फैसला। काम को संरचना - ढिलो, spasmodic। बोसो स्तर पनि उच्च छ। मूल्य - पनि धेरै बजेट छ 190 rubles देखि।
यी उत्पादनहरू पनि डिजाइन र संयुक्त राज्य अमेरिका मा निर्मित छन्। बोतल को मूल्य 430 rubles छ। यो एक पर्याप्त बाक्लो खैरो पायस छ। एक विशेष तामा पाउडर को भाग रूपमा, धन्यवाद ठोस ट्राफिक जाम जो उत्पन्न। काम तयारी प्रभावकारी हुन्छ। तर, दर एक ठूलो प्वाल गर्न पर्छ। तर अवशिष्ट जम्मा वस्तुतः कुनै पनि छन्। यो पनि इन्जिन शीतलन प्रणाली को लागि एक उच्च गुणस्तरीय सीलेंट छ। उहाँको बारेमा प्रतिक्रियाहरू - मात्र सकारात्मक।
यो जर्मन धातु-समावेश Sealants छ। इन्द्रेणी सबै रंग संग तलछट चमक खर्च नगरेर पछि। यो गति मा सबै उत्पादनहरू बीच एक साँचो नेता छ, र लिक रोकियो र फेरि देखा कहिल्यै। जम्मा औसत स्तर भन्दा कम 200 rubles को मूल्य संग।
इन्जिन ठंडा सिस्टम लागि यो घरेलू सीलेंट। समीक्षा BBF - सामान्यतया सकारात्मक। उत्पादन सेतो पायस छ। यो संरचना धेरै प्रभावकारी र क्लासिक मिश्रण काम गर्दछ। को खुलने सबै भन्दा ठूलो गर्न सानो देखि बन्द छन्। वस्तुतः कुनै जम्मा। यो formulated छ बहुलक आधारित र प्वालहरू मा प्लग सानो र चिटिक्क छन्। यस मामला मा, स्टक को अनुमानित मूल्य - मात्र 50 rubles। उत्पादन को कम लागत बावजुद सबै बीच सबै भन्दा राम्रो परिणाम देखाए।
इन्जिन ठंडा सिस्टम लागि सीलेंट कुल्ला
यी रचनाहरूको प्रयोग पछि यो राम्ररी ठंडा सिस्टम धुन सिफारिस गरिएको छ। तर सादा पानी यसलाई गर्न सक्षम हुने छैन। यहाँ विशेष उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
Liqui Moly देखि क्लीनर
यस दबाइ सीलेंट अवशेष, प्रणाली को उचित सञ्चालन रोक्छ जो सहित प्रदूषक वतन को एक किसिम हटाउन डिजाइन गरिएको छ। उत्पादन कुनै पनि आक्रामक पदार्थ समावेश गर्दैन। यो भन्दा प्रणाली मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले सजिलै इन्जिन शीतलन प्रणाली कुनै पनि सीलेंट धोएका गर्न सकिन्छ। समीक्षा - को क्लीनर पछि सिलेंडर टाउको जम्मा बिना बाँकी।
Lavr - जटिल प्रदूषण लागि
यो पनि भारी भरा ठंडा सिस्टम सफा गर्न मद्दत गर्छ जो दुई-घटक छ। यसलाई अन्य प्रदूषक विनाश मात्रा देखि सिस्टम को सबै cavities खाली हुन्छ। तयारीको प्रणाली विभिन्न अशुद्धियों हटाउन बढवा दिन्छ।
उत्पादन alkaline आधारित छ र चिल्लो र अन्य उत्पादनहरु भंग गर्न सक्षम छ। पनि अर्थ अम्लीय एजेन्ट को प्रभाव neutralizes र यस दबाइ निस्तब्धता पूर्ण सुरक्षित छ।
बजार मा कि उस्तै उत्पादनहरू प्रस्ताव अन्य निर्माताहरु छन्। तर हामी उत्पादन गुणस्तर को ठीक कस्तो जान्नु आवश्यक छ। इन्जिन ठंडा प्रणाली सीलेंट कस्तो (को तागत र कमजोरी आकलन प्रतिक्रिया मदत गर्नेछ), यो एक पुरा रूपमा ठंडा सिस्टम गुणस्तर र वाहन मा निर्भर गर्दछ।
चार-पाङ्ग्रा ड्राइव एसयूवी शेवरलेट Captiva: मालिकको र कार विनिर्देशों को समीक्षा
को मफलर एक सीलेंट के हो? अवलोकन निर्माताहरु
पछाडिको पाङ्ग्रा ड्राइव कार: उपकरणको विवरण, को फाइदा र बेफाइदा
तपाईंको आफ्नै तेल छाप क्रैन्कशाफ्ट कार परिवर्तन 2107
देवू Matiz, समीक्षा र सुविधाहरू
को औंलाहरु मा vesicles।
सुशी कसरी खान सिक्न
Freesia: खेती र मूल्य
कसरी हत्यारा लुकाउनु ब्लेड बनाउन: निर्देशन
"मानिसहरू बारे" ओशो को उत्पादन - बुद्धि को एक गोदाम
स्वतः Bazar या कार बिक्री संग गम्भीर सहायता
हामी subwoofer को लागि एक बक्स बनाउछौं आफ्नै हातहरु
दाग लागेको सिसा जेल नेल पलिश कसरी प्रयोग गर्ने?
Zverev (कलाकार) चित्रहरू। Zverev, अनातोली Timofeevich - रूसी अग्र-दल कलाकार
प्याज खोकी संग मह: बच्चाहरु को लागि व्यञ्जनहरु
म जेनेरेसन "मित्सुबिशी Pajero खेल" - मालिकहरूको समीक्षा र दिग्गज बन्द-सडक वाहन को समीक्षा